Tababarka iyo Xirfad-dhisidda | Dhexdhexaadinta Bulshada Minnesota
Tababarka xirfadaha xallinta khilaafaadka iyo dhaqamada soo celinta ayaa ah shaqada udub dhexaadka u ah waxa aan sameyno. Dhexdhexaadinta Bulshada Minnesota ururada xubnaha waxay bareen boqolaal koorasyo ​​waxayna ballaariyeen xirfadaha xirfadeed ee kumanaan reer Minnesota ah. Haddii aad si fudud u qaadanayso xirfad ama laba, jabinaysa goobta dhexdhexaadinta, la soconaysa CLE-yada, ama qabanqaabinaysa dhacdo waxbarasho oo koox yar ama wayn ah, la-hawlgalayaasha CMM waxay hubaal ahaan kuu leeyihiin tababar. Marka la isku daro buug-yaraha, wada-hawlgalayaasha CMM waxay ku faanaan mid ka mid ah kuwa ugu firfircoon uguna kala duwan xallinta khilaafaadka xalinta khilaafaadka iyo jadwallada tababarka dhaqanka soo celinta meel kasta oo ka mid ah gobolka. Dib u eeg tusaalooyinka koorsada hoose oo ku xidh waxyabaha bixiyayaasha si toos ah adoo isticmaalaya isku xidhkooda.
Tababarka Dhexdhexaadinta Guud
Samee faham qotodheer oo ku saabsan dhexdhexaadinta, adeegsigeeda, faa'iidooyinka, caqabadaha;
Horumarinta xirfadaha kala duwan ee lagama maarmaanka u ah si wax-ku-ool ah looga qayb-qaato isku dhaca iyo jiheynta ka-qaybgalayaasha xallintiisa; iyo
Faham habraaca anshaxa, sharciga, iyo xirfadda ee la xidhiidha ku dhaqanka dhexdhexaadinta.
Tababarka Dhexdhexaadinta Qoyska
Samee faham qotodheer oo ku saabsan dhaqdhaqaaqa dhexdhexaadinta qoyska, oo ay ku jiraan tixgelin gaar ah, faa'iidooyinka, iyo caqabadaha;
Faham habraaca anshaxa, sharciga, iyo xirfadda ee la xidhiidha ku dhaqanka dhexdhexaadinta qoyska; iyo
Sahami fursadaha adeegga sida maxkamad, gaar ah, ama dhexdhexaadiyaha qoyska iskaa wax u qabso ah.
Sahami nuxurka iyo caqabadaha gaarka ah ee la xidhiidha dhexdhexaadinta xaalado gaar ah oo kala duwan;
Samee xirfado horumarsan oo balaadhiya awooda oo xoojiya waxqabadka dhexdhexaadiyeyaasha; iyo
Sahami mawduucyo horumarsan oo la xidhiidha dhaqanka anshaxa ee xallinta khilaafaadka kale.
Cadaalada Soo Celinta
Soo bandhig fikradaha aasaasiga ah ee la xidhiidha dhaqamada soo celinta;
Samee xirfado kala duwan oo lagama maarmaanka u ah fududaynta khibrad goobada soo celinta aasaasiga ah; iyo
Faham tilmaamaha xirfadeed ee khuseeya iyo dhaqamada ugu wanaagsan ee la xidhiidha dhaqamada soo celinta.
Cadaalada Soo Celinta ee Dugsiyada
Sahami codsiga gaarka ah iyo caqabadaha hirgelinta dhaqamada soo celinta gudaha goob waxbarasho;
Horumarinta xirfadaha la xidhiidha ka-qaybgalka dhalinyarada iyo u doodista gudaha dugsiga ee barnaamijyada soo celinta; iyo
Faham shuruudaha warbixinta ee suurtogalka ah ee la xidhiidha xulashada muujinta fadhiga.
Xallinta Khilaafaadka Goobta Shaqada
Sahami isticmaalka kala duwan ee xirfadaha xallinta isku dhaca iyo barnaamijyada gudaha xafiis ama goob shaqo oo kale;
Horumarinta xirfadaha la xidhiidha wax ka qabadyada xallinta khilaafaadka muddada gaaban; iyo
Samee xirfado aad ugu dooddo kordhinta isticmaalka xallinta khilaafaadka ee goobta shaqada.
Dhexdhexaadinta Bulshada & Adeegyada Soo Celinta, Inc.
Xarunta Xallinta Khilaafaadka
Dhexdhexaadinta & Xalinta Khilaafaadka
Adeegyada Dhexdhexaadinta ee Degmada Anoka
Barnaamijka Xallinta Khilaafaadka Degmada Rice